Pakistan: 21 ruux ayaa geeriyootay kaddib markii ay ku xayirmeen goob dalxiis oo Baraf ku da’ay! | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Wararka Maanta Pakistan: 21 ruux ayaa geeriyootay kaddib markii ay ku xayirmeen goob dalxiis...
Pakistan: 21 ruux ayaa geeriyootay kaddib markii ay ku xayirmeen goob dalxiis oo Baraf ku da’ay!
Dowladda Pakistan ayaa sheegtay in lagu guuleystay howlgal lagu badbaadinayay Dalxiisayaal ku go’doomay Buurta Murree ee dhacda Waqooyiga Dalkaas kaddib markii baraf xooggan uu ku da’ay deegaankaas.
Ciidamada Militariga & kooxaha gurmadka ee deegaanka ayaa ka qaybgalay soo badbaadinta Dadkaan, waxa ay baraf badan ka fujiyeen Gaadiidkii ay wateen oo dhammaan ka hoos maray barafkaas sida uu sheegay sarkaal katirsan kooxda gurmadka ka qaybgashay.
Inta la xaqiijiyay 21 ruux ayaa geeriyootay waxaana xayirmay Gawaari gaaraya ugu yaraan 157,665 (Boqol, konton & todobo kun, lex boqol, lexdan iyo shan) oo ah nooca kuwa yar yar ee (Raaxada) oo ay la socdeen Dalxiisayaasha.
Cabirka barafka waxaa lagu sheegay in uu ka badan yahay 1.2 Mitir (4 Feet), waxaa xayirmay kumanaan Gawaari ah oo isaga kala gudbi rabay Magaalada loo dalxiis tago & Caasimadda Pakistan ee Islamabad.
“Dhammaan Gawaarida waxay istaageen, dadka dhibaatadu gaartay waxaa la geeyay meel gaar ah oo lagu daweynayo, howsha waxaa ka qaybgalay in ka badan 300 oo ruux oo Dalxiisayaal ah & 1000 askari oo katirsan Ciidanka Militariga oo cunno gaarsiiyay dhibbanayaasha” ayaa lagu yiri war uu soosaaray Militariga Pakistan ee qaybgalay gurmadka Dadka uu go’doomiyay Barafka.
Sarkaal katirsan Militariga Pakistan ayaa tilmaamay in waddooyinkii barafka xiray laga qaaday, 40ka KM ee safarka lagu galo uu wanaagsan yahay, waxa uu ka digay in dhibaato lamid ah tan dhacday oo kale is markale ay wajahaan Dalxiisayaasha inta lagu guda jiro is badelka Cimilada.
Ra’iisul Wasaaraha Pakistan Imran Khan ayaa sheegay in Dowladdiisa ay dedaal gelineyso u gurmashada dadka dhibaatadu gaartay, waxa uu naxdin & xannuun maskaxeed ku tilmaamay dhibaatada dhacday.
Is badelka Cimilada oo loo sababeynayo Qiiqa warshadaha ayaa saameyn taban ku reebay dalal kala duwan, Barafka, Dabeylaha & calaamado dhif iyo naadir ku ah dalal kala duwan ayaa la arkay sanadii dambe.
Previous articleFalagle: Saraakiisha ku geeriyootay Galgaduud waxa ay wadeen Sahan deegaannada ah.
Next articleMilitary man accused of killing civilian executed in southwestern Somalia